Dumbbell 50 lbs Fitness Dial Dumbbell Series Strength Training arọ Ngwa mgbatị ahụ maka nwoke na nwanyị na-emega ahụ Dumbbell
Nha: 24 na 32KG
Arọ: 24 na 32KG
Ihe onwunwe Nylon, Alloy Steel
Akụkụ akụkụ 24 na 32KG
nọmba usoro n'usoro :YL010
Dumbbell ọ bụla na-agbanwe site na 5 ruo 52.5 pound, Dumbbell na-agbanwe agbanwe na-ahapụ gị ka ị gbanwee nha na 2.5 Ib increments ruo 52.5 Ibs.
Dochie akwa dumbbell zuru ezu wee nweta uru kachasị na oghere gị.Anyị dumbbell na-enye gị ihe niile 10-ibe set na otu dumbbell.
Ebe nchekwa dị mfe - kọmpat imewe na-enye gị ohere ịchekwa ma jiri dumbbells ebe ọ bụla ka ị ka na-enweta ezigbo mmetụta dumbbell.
Nwee obi ụtọ na nhazi kọmpat nke Dumbbell gị na-agbanwe agbanwe, na-abawanye ike nchekwa gị.
Biko ṅaa ntị na enwere naanị 1 dumbbell na ngwugwu, ị nwere ike ịzụta 2 dị ka setịpụ dumbbell.Enwere ike ịme ihe niile maka otu maka akụkụ ahụ gị niile yana nhọrọ mgbatị ahụ na-enweghị atụ dị ka shrugs, lunges, curls na ibuli elu.
Dị ka mmechi mgbatị ahụ zuru ebe niile na 2020 gosipụtara, ọ bụghị echiche ọjọọ ịkwakọba ụfọdụ ihe dị mkpa mgbatị ahụ ụlọ.Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ụlọ mgbatị ụlọ ma ọ bụ ohere mgbatị ahụ, ihe dị ukwuu banyere dumbbells na-agbanwe agbanwe bụ na ha chọrọ obere ohere - ọ bụrụhaala na ị na-arụ ọrụ naanị otu ụzọ abụọ.Nke ahụ dị mfe ma ọ bụrụ na ị na-etinye ego na nhazi a na-agbanwe agbanwe, nke nwere ike ịgbanwe site na ọkụ gaa n'ịdị arọ site na ntugharị ngwa ngwa ma ọ bụ ngbanwe nke ntọala.
Site na otu ụzọ dumbbells na-agbanwe agbanwe, ị nwere ike were ọzụzụ gị gaa n'ọkwa ọzọ na-enweghị ịzọ ụkwụ na mgbatị ahụ, ma na-ebelata oke akụrụngwa ị chọrọ.Naanị otu dumbbell nwere ike dochie anya ihe ruru 15.Ugbu a nke ahụ bụ ihe anyị na-akpọ arụmọrụ.
Anyị ga-anabata akara ngosi omenala, imewe ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa maka ihe a ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa maka ahụike ahụike, iwu OEM maka dumbbell na-agbanwe agbanwe dị.
Ọ bụrụ na ị chọrọ naanị obere ego nke usoro, anyị nwekwara ike na-enye gị si anyị ngwaahịa.
Nke gara aga: Ihe nkedo Dumbbells Rubber Ekpuchiri Iron Hex Black Dumbbell Set Dumbbell Arọ efu
Osote: Kettlebell Star Moon Kettlebell arọ na-ebuli ngwa egwuregwu ime ụlọ nwere kettlebells ahaziri nke ọma.
Ntọala Dumbbells na-agbanwe agbanwe - 11-22 Pound Ad...
Ibu Aka Dumbbell (A na-ere ya na ndị na-alụbeghị di) - ...
Ntọala arọ Dumbbell - 5-in-1 Ntọala Dumbbell ...
Hex Dumbbell Rubber nwere mkpuchi, ibu Dumbbell Ya mere ...
Dumbbell Vinyl Ekpuchiri Aka Ibu Dumbbell Pair